ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ | ခံတွင်း၊ မျက်နှာနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်မှု
ခံတွင်း၊ မျက်နှာနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်မှု
Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery:aclinical study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(2):138-40.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 11286449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286449 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Induced hypotensive anesthesia for adolescent orthognathic surgery patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Oral Maxillofac Surg 1996;54(6):680-3.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 8648471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8648471 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)